Crestor vs. Lipitor: ကွဲပြားခြားနားမှုများ၊ တူညီခြင်းနှင့်သင့်အတွက်ပိုကောင်းသည့်အရာ - မူးယစ်ဆေးဝါး သူငယ်ချင်း | ဇွန်လ 2022
ကုမ္ပဏီသတင်း အိမ်မွေးတိရိစ္ဆန် ကုမ္ပဏီ, သတင်း မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း ရပ်ရွာ ကုမ္ပဏီ, မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုင်ရာအချက်အလက် မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း, သတင်း သတင်း၊ သတင်း ကျန်းမာရေးပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးပညာရေး ကုမ္ပဏီ ကျန်းမာရေးပညာရေး၊ ဖျော်ဖြေရေး ကုမ္ပဏီ, အဆိုပါကုန်ပစ္စည်း
အဓိက >> မူးယစ်ဆေးဝါး သူငယ်ချင်း >> Crestor vs. Lipitor: ကွဲပြားခြားနားမှုများ၊ တူညီခြင်းနှင့်သင့်အတွက်ပိုကောင်းသည့်အရာ
Crestor vs. Lipitor: ကွဲပြားခြားနားမှုများ၊ တူညီခြင်းနှင့်သင့်အတွက်ပိုကောင်းသည့်အရာ
မူးယစ်ဆေးဝါးခြုံငုံသုံးသပ်ချက် & အဓိကကွဲပြားခြားနားမှု | ကုသအခြေအနေများ | ထိရောက်မှု | အာမခံလွှမ်းခြုံမှုနှင့်ကုန်ကျစရိတ်နှိုင်းယှဉ်မှု | ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး | မူးယစ်ဆေးဝါး interaction က | သတိပေးချက်များ | အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးစင်တာများ (CDC) ၏အဆိုအရအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိအရွယ်ရောက်ပြီးသူ ၃၈ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သည်ကိုလက်စထရောမြင့်မားကြသည်။ အကယ်၍ သင့်တွင်ကိုလက်စထရောမြင့်မားပါကသင်၏အစားအစာနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းများ၏အရေးကြီးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏ဆရာဝန်ကသင့်အားအကြံပေးလိမ့်မည်။ သင်၏ဆရာ ၀ န်မှလည်း statin ဆေးစတင်ဖော်ပြရန်ပြောကောင်းပြောလိမ့်မည်။ statins များသည် HMG-CoA reductase inhibitors ဟုလူသိများသောလူကြိုက်များသည့်ဆေးညွှန်းဆေးများဖြစ်သည်။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်သည်ကိုလက်စထရောဖြစ်စေရန်လိုအပ်သောအင်ဇိုင်း (HMG-CoA reductase ဟုခေါ်သော) ကိုပိတ်ဆို့ခြင်းဖြင့်သူတို့အလုပ်လုပ်သည်။
Crestor နှင့် Lipitor တို့သည်လက်စထရောအဆင့်ကိုလျှော့ချရန်အသုံးပြုသည့်နာမည်ကြီးတံဆိပ် ၂ ခုဖြစ်သည်။ ထိုဆေးနှစ်မျိုးလုံးကိုအမေရိကန်အစားအစာနှင့်ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန (FDA) ကအတည်ပြုသည်။ ၎င်းကိုကိုလက်စထရောကိုလျှော့ချရန်အဆီနည်းသောအဆီနှင့်ကိုလက်စထရောဓာတ်တို့နှင့်အတူအသုံးပြုသည်။ Crestor နှင့် Lipitor နှစ်ခုလုံးသည် statins များဖြစ်သော်လည်း၎င်းတို့သည်အတူတူမဟုတ်ပါ။ Crestor နှင့် Lipitor အကြောင်းပိုမိုလေ့လာရန်ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါ။
Crestor နှင့် Lipitor အကြားအဓိကကွာခြားချက်များမှာအဘယ်နည်း။
Crestor (ဘာလဲ Crestor?) နှင့် Lipitor (Lipitor ဆိုတာဘာလဲ။ ) သည်နှစ် ဦး စလုံး lipid- လျှော့ချဆေးများဖြစ်ကြသည်။ ၎င်းတို့ကို statins သို့မဟုတ် HMG-CoA reductase inhibitors ဟုလူသိများသည်။ ဆေးနှစ်မျိုးလုံးသည်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ယေဘူယျပုံစံနှင့်တက်ဘလက်ကဲ့သို့သာရနိုင်သည် AstraZeneca သည် Crestor အမှတ်တံဆိပ်ကိုထုတ်လုပ်ပြီး Pfizer သည် Lipitor အမှတ်တံဆိပ်ကိုထုတ်လုပ်သည်။ Crestor နှင့် Lipitor ကိုလူကြီးများတွင်အများဆုံးအသုံးပြုကြသည်။ သို့သော်အချို့ဖြစ်ရပ်များတွင်၎င်းတို့ကိုကလေးများတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
Crestor နှင့် Lipitor အကြားအဓိကကွဲပြားခြားနားမှု
မူးယစ်ဆေးအတန်း HMG-CoA reductase inhibitor (statin သို့မဟုတ် lipid-lowering agent လို့လည်းလူသိများ) HMG-CoA reductase inhibitor (statin သို့မဟုတ် lipid-lowering agent လို့လည်းလူသိများ)
ကုန်အမှတ်တံဆိပ် / ယေဘုယျအဆင့်အတန်း ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ယေဘုယျ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ယေဘုယျ
ယေဘုယျနာမည်ကဘာလဲ? Rosuvastatin Atorvastatin
မည်သည့်ပုံစံ (များ) ကိုမူးယစ်ဆေးဝါးထဲသို့ဝင်သနည်း။ တက်ဘလက် တက်ဘလက်
စံသောက်သုံးသောကဘာလဲ? ဥပမာ - ၁၀ မီလီဂရမ်နေ့စဉ် ဥပမာ: 20 မီလီဂရမ်နေ့စဉ်
ပုံမှန်ကုသမှုဘယ်လောက်ကြာမလဲ ရေရှည် ရေရှည်
ဒီဆေးကိုဘယ်သူကပုံမှန်သုံးသလဲ။ လူကြီးများ၊ ကလေးများ ၇ နှစ်နှင့်အထက် (အချို့အခြေအနေများတွင်) လူကြီးများ၊ ကလေးများ ၁၀ နှစ်နှင့်အထက် (အချို့ဖြစ်ရပ်များတွင်)
Crestor နှင့် Lipitor ကကုသအခြေအနေများ
ကိုလက်စထရောကိုလျှော့ချရန် Crestor နှင့် Lipitor ကိုအသုံးပြုသည်။ Crestor or Lipitor ကိုလက်စထရောအဆီနည်းစေတဲ့အဆီနှင့်ကိုလက်စထရောဓာတ်များပါ ၀ င်သင့်ပါတယ်။ Crestor နှင့် Lipitor သည်စုစုပေါင်းလက်စထရော၊ LDL, ApoB နှင့် triglycerides ။ သူတို့က HDL ကိုလက်စထရော, ကိုလက်စထရော၏ကောင်းသောမျိုးကိုတိုးမြှင့်။
အခြားလက္ခဏာများကိုအောက်ပါဇယားတွင်ဖော်ပြထားသည်။ Crestor နှင့် Lipitor တို့ကို Fredrickson I နှင့် V dyslipidemias ကုသမှုများတွင်မလေ့လာခဲ့ပါ။
အခြေအနေ မင် Lipitor
အရွယ်ရောက်သူများအတွက် Hyperlipidemia နှင့်ရောထွေး dyslipidemia ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
ကလေးများအတွက်မိသားစု Hypercholesterolemia ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
အရွယ်ရောက်သူများအတွက် Hypertriglyceridemia ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
လူကြီးများအတွက်မူလတန်း dysbetalipoproteinemia (အမျိုးအစား III hyperlipoproteinemia) ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
လူကြီးများအတွက် Homozygous မိသားစု hypercholesterolemia ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
အရွယ်ရောက်ပြီးသူများတွင်သွေးကြောဆိုင်ရာတိုးတက်မှုနှေးကွေး ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါကာကွယ်ခြင်း (နှလုံးရောဂါ၊ နှလုံးရောဂါ) ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
Crestor or Lipitor ကပိုပြီးထိရောက်သလား။
သုတေသီများကခေါ်သည့်လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတစ်ခုတွင် statins များစွာကိုနှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည် ကြယ်စမ်းသပ် (မြင့်မားသော lipid အဆင့်များအတွက် Statin ကုထုံးများသည်ဆေးဝါးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်။ Rosuvastatin နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်) ။ ၎င်းတို့သည် Lipitor, Crestor, Zocor နှင့် Pravachol တို့၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုခြောက်ပတ်ကြာပြီးနောက် LDL (low-density lipoprotein) လက်စထရောကိုလျှော့ချပေးသည်။
လေ့လာမှုအရ Crestor သည် LDL လက်စထရောကို Lipitor ထက် ၈.၂% ပိုမိုလျှော့ချနိုင်ပြီး Crestor သည်အခြားလေ့လာမှုများအရအခြားသော statins များထက်စုစုပေါင်းလက်စထရောကိုသိသိသာသာလျှော့ချနိုင်ခဲ့သည်။ Crestor သည် Lipitor ထက် HDL ကိုလက်စထရော (ကောင်းမွန်သောလက်စထရောအမျိုးအစား) ကိုများစေခဲ့သည်။ Crestor ကိုသောက်သောလူနာများတွင်ဆေးပမာဏပေါ် မူတည်၍ ၈၂-၈၉% သည် LDL ကိုလက်စထရောရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ခဲ့ပြီး ၆၉-၈၅% သည် Lipitor ကိုသောက်သောလူများ၏။ အားလုံး statins အလားတူသည်းခံခဲ့ကြသည်။
နောက်ထပ်လေ့လာမှုက Saturn ရုံးတင်စစ်ဆေး (Intravascular Ultrasound မှ Coronary Atheroma လေ့လာမှု - Rosuvastatin နှင့် Atorvastatin နှင့်သက်ဆိုင်မှု) Crestor သည်နေ့စဉ် ၄၀ မီလီဂရမ်နှင့် Lipitor 80 မီလီဂရမ်ကိုနေ့စဉ်သောက်သုံးမှုနှင့် Coronary atherosclerosis ၏တိုးတက်မှုအပေါ်သူတို့၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလေ့လာခဲ့သည်။ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါသည်သွေးကြောများကျဉ်းခြင်းနှင့်သွေးလွှတ်ကြောများတွင်ကယ်လစီယမ်နှင့်အဆီဓာတ်များစုဆောင်းခြင်း၊ သွေးအားဖြင့်နှလုံးသို့ရောက်ရန်နှင့်နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ချေပိုမိုမြင့်မားစေသည်။
အဆိုပါလေ့လာမှုကိုလည်းဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုကြည့်ရှုကြ၏။ ၂ နှစ်အကြာအများဆုံးဆေးသောက်ပြီးနောက်တွင် Crestor အုပ်စုသည် Lipitor အုပ်စုထက် LDL အဆင့်နိမ့်ပြီး HDL အဆင့်အနည်းငယ်ပိုများသည်။ Crestor ထုတ်လုပ်သူ AstraZeneca သည်ဤလေ့လာမှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ခဲ့သည်ကိုသတိပြုသင့်သည်။ သို့သော်၎င်းဆေးများကိုအမြင့်ဆုံးဆေးများဖြင့်သာပေးသည်၊ ၎င်းသည်ပျမ်းမျှလူနာများအတွက်လက်တွေ့အခြေအနေ၌မတူပါ။ ) Crestor နှင့် Lipitor နှစ်မျိုးလုံး အလားတူအတိုင်းအတာအထိသွေးကြောဆိုင်ရာ၏ဆုတ်ယုတ်။ နှစ် ဦး စလုံးမူးယစ်ဆေးဝါးများသည်ကောင်းစွာသည်းခံခဲ့ကြပြီးဓာတ်ခွဲခန်းမူမမှန်နိမ့်ဖြစ်ပွားမှုရှိခဲ့ပါတယ်။
လက်တွေ့အခြေအနေတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးနှစ်မျိုးလုံးကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သတ်မှတ်ထားပြီးကောင်းစွာသည်းခံနိုင်သည်။ သင်၏ဆေးကုသမှုခံယူသူအားသင်၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေ၊ သမိုင်းကြောင်းနှင့် Crestor သို့မဟုတ် Lipitor တို့နှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်သောဆေးဝါးများကိုသင်စဉ်းစားနိုင်သည့်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးအထိရောက်ဆုံးဆေးကိုသင်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။
Creitor နှင့် Lipitor နှိုင်းယှဉ်မှုနှင့်ကုန်ကျစရိတ်နှိုင်းယှဉ်မှု
Crestor or Lipitor ကိုယေဘူယျပုံစံများဖြစ်သော rosuvastatin သို့မဟုတ် atorvastatin တွင်အာမခံနှင့် Medicare ဆေးညွှန်းအစီအစဉ်များပါ ၀ င်သည်။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ထုတ်ကုန်ကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်ပိုပိုသောငွေပေးချေမှုကိုဖြစ်စေလိမ့်မည်သို့မဟုတ်ဖုံးလွှမ်းမည်မဟုတ်ပါ။
ပုံမှန်ဆေးညွှန်း ၃၀၊ ၁၀ မီလီဂရမ်ဆေးပြား rosuvastatin (ယေဘုယျ Crestor) အတွက်၊ အိတ်ကပ်ထဲမှစျေးနှုန်းသည်ဒေါ်လာ ၁၃၄ ခန့်ဖြစ်သည်။ ပါဝင်သည့်ဆေးဆိုင်များတွင်စျေးနှုန်းကို ၁၁ ဒေါ်လာအထိလျှော့ချရန်အခမဲ့ SingleCare ကူပွန်ကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
ပုံမှန်ဆေးညွှန်း ၃၀၊ ၂၀ မီလီဂရမ်ဆေးပြား atorvastatin (ယေဘုယျ Lipitor) ကိုသင်အိတ်ကပ်ထဲမှထုတ်ယူလျှင်ဒေါ်လာ ၈၂ ခန့်ကျသင့်မည်။ SingleCare ယေဘူယျ Lipitor ကူပွန်သည်စျေးနှုန်းကိုခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၁၅ ဒေါ်လာအထိကျဆင်းစေနိုင်သည်။
အစီအစဉ်များပြောင်းလဲပြီးပြောင်းလဲနိုင်သည်နှင့်အမျှ Crestor နှင့် Lipitor ၏လွှမ်းခြုံမှုနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များအတွက်သင်၏အာမခံကုမ္ပဏီသို့ဆက်သွယ်ပါ။
ပုံမှန်အားဖြင့်အာမခံဖြင့်ဖုံးလွှမ်း? ဟုတ်ကဲ့ (ယေဘူယျ) ဟုတ်ကဲ့ (ယေဘူယျ)
ပုံမှန်အားဖြင့် Medicare အပိုင်း D ကိုဖုံးလွှမ်း? ဟုတ်ကဲ့ (ယေဘူယျ) ဟုတ်ကဲ့ (ယေဘူယျ)
အရေအတွက် ဥပမာ - ၃၀၊ ၁၀ မီလီဂရမ်ဆေးပြားများ ဥပမာ - ၃၀၊ ၂၀ မီလီဂရမ်ဆေးပြားများ
ပုံမှန် Medicare copay $ 0- $ 20 $ 0- $ 15
SingleCare ကုန်ကျစရိတ် $ 11 + $ 15 +
Crestor vs. Lipitor ၏ဘုံဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ
ကြွက်သားနာကျင်ခြင်း၊ ဝမ်းဗိုက်နာခြင်း၊ ပျို့ချင်ခြင်းနှင့်အားနည်းခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
Lipitor ၏အသုံးအများဆုံးဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုများမှာအအေးမိခြင်း၊ အဆစ်နာခြင်း၊ ဝမ်းလျှောခြင်း၊ အစွန်းရောက်နာကျင်ခြင်းနှင့်ဆီးလမ်းကြောင်းရောဂါများဖြစ်သည်။
Crestor နှင့် Lipitor ၏ရှားပါးသော်လည်းပြင်းထန်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာ myopathy (ကြွက်သားအားနည်းခြင်း) နှင့် rhabdomyolysis (အလွန်ဆိုးကျိုးဖြစ်စေနိုင်သောကြွက်သားတစ်သျှူးများပြိုကွဲခြင်း) ဖြစ်သည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကများအတွက်သတိပေးချက်များအပိုင်းကိုကြည့်ပါ။
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပွားမှုသည်သောက်သုံးသောပမာဏနှင့်ကွဲပြားနိုင်သည်။ ဤသည်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ၏စာရင်းအပြည့်အစုံမဟုတ်ပါဘူး။ အခြားပြင်းထန်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်နိုင်သည်။ Crestor သို့မဟုတ် Lipitor မှမည်သည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများနှင့်မည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကိုသင်၏ကျန်းမာရေးပြုစုသူအားပြောပါ။
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး သက်ဆိုင်ပါသလား။ ကြိမ်နှုန်း သက်ဆိုင်ပါသလား။ ကြိမ်နှုန်း
ခေါင်းကိုက်ခြင်း ဟုတ်တယ် ၅.၅% မဟုတ်ဘူး -
ပျို့ချင်သည် ဟုတ်တယ် ၃.၄% ဟုတ်တယ် ၄%
ကြွက်သားများနာခြင်း၊ ဟုတ်တယ် ၂.၈% ဟုတ်တယ် ၃.၈%
အဆစ်နာခြင်း ဟုတ်တယ် ကွဲပြားသည် ဟုတ်တယ် ၆.၉%
အစွန်းအတွက်နာကျင်မှု မဟုတ်ဘူး - ဟုတ်တယ် ၆%
ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်း မဟုတ်ဘူး - ဟုတ်တယ် ၅.၇%
အားနည်းချက် ဟုတ်တယ် ၂.၇% ဟုတ်တယ် ၆.၉%
အစာ မဟုတ်ဘူး - ဟုတ်တယ် ၄.၇%
ဝမ်းချုပ်ခြင်း ဟုတ်တယ် ၂.၄% မဟုတ်ဘူး -
ဝမ်းလျှောခြင်း မဟုတ်ဘူး - ဟုတ်တယ် ၆.၈%
ဝမ်းဗိုက်နာကျင်မှု ဟုတ်တယ် %2% ဟုတ်တယ် % အစီရင်ခံတင်ပြသည်
အအေးမိ မဟုတ်ဘူး - ဟုတ်တယ် ၈.၃%
ရင်းမြစ် - DailyMed ( မင် ), DailyMed ( Lipitor )
Lipitor vs. Lipitor ၏မူးယစ်ဆေးဝါး interaction က
Lipitor နှင့် ပတ်သက်၍ သိရန်အရေးကြီးသောတုံ့ပြန်မှုမှာသင်တစ်နေ့လျှင် ၁.၂ လီတာထက်ပိုသောစပျစ်သီးဖျော်ရည်များမသောက်သင့်ပါ။ Grapfruit သစ်သီးဖျော်ရည်များသည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ Lipitor အဆင့်ကိုမြင့်တက်စေပြီး myopathy (ကြွက်သားအားနည်းမှု) နှင့် rhabdomyolysis (အလွန်ပျက်စီးစေနိုင်သောကြွက်သားတစ်သျှူးပြိုကွဲမှု) ကိုပိုမိုခံစားရနိုင်သည်။
ဤရွေ့ကားကြွက်သားပြproblemsနာများသည်စပျစ်သီးဖျော်ရည်များပိုမိုစားသုံးခြင်းဖြင့်ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသော်လည်းပမာဏနည်းပါးစွာဖြင့်ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်စပျစ်သီးကိုစားလျှင်၊ သို့မဟုတ်ဂရက်ဖိုသီးဖျော်ရည်ကိုသောက်ပြီး Lipitor ကိုသောက်ပါကမည်မျှစားသုံးသင့်သည်ကိုဆရာဝန်အားမေးမြန်းပါ။ Crestor သည်စပျစ်သီးအသီးဖျော်ရည်နှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုမရှိပါ။
Crestor နှင့် Lipitor တို့သည်အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီအတွက်အသုံးပြုသော cyclosporine, gemfibrozil, niacin, fenofibrate, colchicine နှင့်အချို့သောဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးဆေးဝါးများနှင့်အတူတူပင်မူးယစ်ဆေးဝါးအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုအချို့ရှိသည်။ Crestor သို့မဟုတ် Lipitor ကိုဤဆေးဝါးတစ်မျိုးနှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းသည် statin အဆင့်ကိုမြင့်တက်စေပြီး myopathy နှင့် rhabdomyolysis အန္တရာယ်များကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးပေါင်းစပ်မှုနှင့်သင်၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသမိုင်း / အခြေအနေများပေါ် မူတည်၍ သင်၏ဆရာဝန်သည်သင်၏ဆေးသောက်သုံးသောပမာဏကိုပြောင်းလဲရန်သို့မဟုတ်အခြားဆေးကိုရွေးချယ်ရန်လိုအပ်နိုင်သည်။
Crestor သို့မဟုတ် Lipitor မသောက်မီဆရာဝန်ကဆေးညွှန်း၊ အဝေးမှ (OTC) နှင့်ဗီတာမင်များအပါအ ၀ င်သင်ဆေးဝါးများအားလုံးကိုသင့်ဆရာဝန်အားပြောပြပါ။ ထို့ကြောင့် Crestor သို့မဟုတ် Lipitor သည်သင့်အတွက်လုံခြုံမှုရှိမရှိသူတို့ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။
မူးယစ်ဆေးဝါး မူးယစ်ဆေးအတန်း မင် Lipitor
Cyclosporine ခုခံအားကျဆင်းမှု ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
Gemfibrozil မြင့်မားသော triglycerides များအတွက်ဆေး ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
အချို့သောဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးဆေးဝါးများ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး HIV ဆေးဝါးများ ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
Itraconazole Azole antifungal မဟုတ်ဘူး ဟုတ်တယ်
Clarithromycin Macrolide ပantibိဇီဝဆေး မဟုတ်ဘူး ဟုတ်တယ်
Darolutamide ဆီးကျိတ်ကင်ဆာများအတွက်အန်ဒရိုဂျင်အဲဒီ receptor inhibitors ဟုတ်တယ် မဟုတ်ဘူး
Regorafenib ကင်ဆာများအတွက် Kinase inhibitor ဟုတ်တယ် မဟုတ်ဘူး
Warfarin Antikoagulant ဟုတ်တယ် မဟုတ်ဘူး
နီကာ ကပ်ရောဂါအေးဂျင့် ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
Fenofibrate ကပ်ရောဂါအေးဂျင့် ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
Colchicine အရသာခံအေးဂျင့် ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
Rolaids ပacိဇီဝဆေး ဟုတ်တယ် မဟုတ်ဘူး
စပျစ်သီးဖျော်ရည် စပျစ်သီးဖျော်ရည် မဟုတ်ဘူး ဟုတ်တယ်
Rifampin ကပ်ပါးကောင် မဟုတ်ဘူး ဟုတ်တယ်
ခံတွင်း contraceptives ခံတွင်း contraceptives မဟုတ်ဘူး ဟုတ်တယ်
Digoxin နှလုံး glycosides မဟုတ်ဘူး ဟုတ်တယ်
Crestor နှင့် Lipitor ၏သတိပေးချက်များ
ရှားပါးသောအခြေအနေများတွင် statin ဆေးကြောင့်ကြွက်သားအားနည်းခြင်းနှင့်ပြိုကွဲခြင်းတို့ဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ ၎င်းသည်မည်သည့်ဆေးဖြင့်မဆိုဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ သို့သော်ပိုမိုမြင့်မားသောဆေးများနှင့်ပိုမိုတွေ့ရလေ့ရှိသည်။ အသက် ၆၅ နှစ်နှင့်အထက်လူကြီးများ၊ ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာပြwithနာများရှိသည့်လူနာများနှင့်ထိန်းချုပ်မှုမရှိသော hypothyroidism လူနာများကိုသတိဖြင့်ဂရုပြုပါ။ fenofibrate, niacin, cyclosporine, colchicine (သို့မဟုတ်) HIV အတွက်အသုံးပြုသောဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးဆေးဝါးများကဲ့သို့သောအခြားဆေးဝါးများကို Crestor (သို့) Lipitor နှင့်တွဲဖက်သုံးစွဲပါကဤအန္တရာယ်များတိုးလာနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်နားမလည်သည့်ကြွက်သားနာကျင်မှု၊ ကြွက်သားအားနည်းခြင်းသို့မဟုတ်နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းရှိပါကအထူးသဖြင့်သင်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ပြီး / သို့မဟုတ်အဖျားရှိလျှင်သင်၏ဆရာဝန်ကိုချက်ချင်းအကြောင်းကြားပါ။ အကယ်၍ သင်သည် creatine kinase အဆင့်သို့မဟုတ်သိသိသာသာ myopathy တိုးမြှင့်ထားပါက Crestor သို့မဟုတ် Lipitor ကိုရပ်တန့်သင့်သည်။
ရှားရှားပါးပါးဖြစ်ရပ်များတွင်, ခုခံအား -mediated necrotizing myopathy (IMNM) လို့ခေါ်တဲ့အခွအေနေ statin ကုသမှုမှပေါ်ပေါက်နိုင်ပါတယ်။ လက္ခဏာနှင့်ရောဂါလက္ခဏာများတွင်ကြွက်သားအားနည်းခြင်းနှင့်ဓာတ်ခွဲခန်းများတွင်ပြောင်းလဲမှုများပါဝင်သည်။
Crestor သို့မဟုတ် Lipitor မစတင်မှီ၊ အသည်းပြproblemsနာတစ်ခုခုရှိလျှင်ကုသမှုပြုစဉ်နှင့် / သို့မဟုတ်ဆရာဝန်ကထိုသွေးစစ်ဆေးမှုများနှင့်သင့်လျော်သည်ဟုခံစားရသည့်အခါလူနာများသည်အသည်းအင်ဇိုင်းဓာတ်ခွဲခန်းစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်သင့်သည်။ Statin ဆေးများသည် AST သို့မဟုတ် ALT အဆင့်များကိုမြင့်တက်စေနိုင်သည်။ ရှားရှားပါးပါးဖြစ်ရပ်များတွင် statins သောက်သုံးသောလူနာများတွင်အသည်းပျက်ကွက်ခြင်း (fatal သို့မဟုတ် non-fatal) ဖြစ်ပွားခဲ့သည် ပြင်းထန်သောအသည်းဒဏ်ရာရပါက Crestor သို့မဟုတ် Lipitor ကိုချက်ချင်းရပ်တန့်သင့်သည်။ အကယ်၍ သင်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု၊ အစာစားချင်စိတ်ပျောက်ဆုံးခြင်း၊ ဆီးလမ်းကြောင်းသို့မဟုတ်အရေပြားသို့မဟုတ်မျက်စိအဝါရောင်ရောဂါလက္ခဏာများရှိပါကသင်၏ဆရာဝန်နှင့်ချက်ချင်းဆက်သွယ်ပါ။
အရက်များစွာသောက်သောလူနာများတွင် Crestor သို့မဟုတ် Lipitor ကိုသတိထားပါ။
Crestor or Lipitor ကိုအသည်းရောဂါဖြစ်ပွားသူလူနာများတွင်သတိထားပါ။ တက်ကြွသောအသည်းရောဂါရှိသူများသည် Crestor သို့မဟုတ် Lipitor ကိုမသုံးသင့်ပါ။
ဂလူးကို့စအဆင့်နှင့်ဟေမိုဂလိုဘင် A1C အဆင့်ပြောင်းလဲမှုများသည် Crestor သို့မဟုတ် Lipitor မှဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။ ketoconazole, spironolactone သို့မဟုတ် cimetidine နှင့်အတူတကွအသုံးပြုခြင်းသည်အန္တရာယ်တိုးလာနိုင်သည်။
ရှားပါးသောကိစ္စများတွင်မှတ်ဉာဏ်ဆုံးရှုံးမှု (သို့) ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ သင်သို့မဟုတ်သင်ချစ်ရသူတစ် ဦး ကအပြောင်းအလဲတစ်ခုခုကိုသတိပြုမိပါကသင်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူအားချက်ချင်းဆက်သွယ်ပါ
တစ်နာရီ ၁၂ နာရီအတွင်း Crestor သို့မဟုတ် Lipitor ဆေးနှစ်ချောင်းမသောက်ပါနှင့်။
Crestor သို့မဟုတ် Lipitor ကိုမည်သည့်နေ့တွင်မဆိုအစာနှင့်ဖြစ်စေ၊ မပါဖြစ်စေစားနိုင်သည်။ တက်ဘလက်တပြင်လုံးကိုမျို။
သန္ဓေသားအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောကြောင့် Crestor သို့မဟုတ် Lipitor ကိုဘယ်သောအခါမျှကိုယ်ဝန်မသုံးသင့်ပါ။ Crestor သို့မဟုတ် Lipitor ကိုသောက်နေစဉ်မိခင်နို့မတိုက်ပါနှင့်။
နောက်ထပ် Crestor သတိပေးချက်များ:
(warfarin ကဲ့သို့) anticoagulant ဆေးသောက်သောလူနာများသည် Crestor မသောက်မီသေချာစွာစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးသင့်ပြီး INRIN တည်ငြိမ်နေစေရန်အတွက် statin ကုသမှုအစတွင်မကြာခဏပြုလုပ်သင့်သည်။
လူမီနီယမ်နှင့်မဂ္ဂနီဆီယမ်ပါ ၀ င်သည့် antacid ကိုသောက်သောလူနာများသည် Crestor ကိုသောက်ပြီးနောက် ၂ နာရီအကြာတွင် Antacid ကိုသောက်သုံးသင့်သည်။
နောက်ထပ် Lipitor သတိပေးချက်များ:
Lipitor နှင့်အတူစပျစ်သီးနှင့် / သို့မဟုတ်စပျစ်သီးဖျော်ရည် (နေ့စဉ် ၁.၂ လီတာကျော်) ပိုလျှံစွာစားသုံးခြင်းသည် myopathy နှင့် rhabdomyolysis အန္တရာယ်ကိုပိုမိုဖြစ်စေနိုင်သည်။
Crestor vs. Lipitor နှင့်ပတ်သက်ပြီးမကြာခဏမေးသောမေးခွန်းများ
Crestor သည်မြင့်မားသောကိုလက်စထရောကိုကုသရန်အသုံးပြုသော statin သို့မဟုတ် HMG-CoA reductase inhibitor ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ယေဘုယျအမည် rosuvastatin ဖြစ်ပါတယ်။ Crestor ကိုကုန်အမှတ်တံဆိပ်ရော၊ ယေဘူယျပုံစံရော၊ တက်ဘလက်အနေနဲ့ပါရရှိနိုင်ပါတယ်။
Lipitor သည် Crestor ကဲ့သို့အလွန်မြင့်မားသောကိုလက်စထရောအတွက်အသုံးပြုသော statin ဆေးဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ယေဘုယျအမည် atorvastatin ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ယေဘူယျအားဖြင့်တက်ဘလက်ပုံစံဖြင့်ရရှိနိုင်သည်။
Crestor နဲ့ Lipitor အတူတူလား?
Crestor နှင့် Lipitor နှစ် ဦး စလုံး statins ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကအတူတူပင်အလုပ်လုပ်နှင့်အချို့တူညီရှိသည်။ သို့သော်သူတို့အတိအကျအတူတူမရှိကြပေ။ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောအချက်အလက်များနှင့်ကွဲပြားမှုများကိုသင်ဖတ်ရှုနိုင်သည်။ သင်ကြားသိခဲ့ရသောအခြား statins များလည်းပါ ၀ င်သည် Pravachol (pravastatin), Zocor (simvastatin), Livalo (pitavastatin), Lescol (fluvastatin) နှင့် Mevacor (lovastatin) ။
Crestor သို့မဟုတ် Lipitor ပိုကောင်းသလား
လေ့လာမှုများအရဆေးနှစ်မျိုးလုံးသည်ကိုလက်စထရောကိုလျှော့ချရာတွင်ထိရောက်မှုရှိကြောင်းပြသခဲ့သည်။ အချို့လေ့လာမှုများက Crestor သည် ပို၍ ထိရောက်ကြောင်းပြသသည်။ သို့သော်နှစ် ဦး စလုံးမူးယစ်ဆေးဝါးများထိရောက်သောနှင့်ကောင်းစွာသည်းခံဖြစ်ကြသည်။ သင်၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသမိုင်းကြောင်းအရဤဆေးဝါးများသည်သင့်အတွက် ပို၍ သင့်တော်မှုရှိမရှိသင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူအားမေးမြန်းပါ။
ကိုယ်ဝန်ရှိနေစဉ် Crestor သို့မဟုတ် Lipitor ကိုသုံးလို့ရပါသလား။
Crestor သို့မဟုတ် Lipitor ကိုကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးမှဘယ်တော့မှမယူသင့်ပါ။ ဒီဆေးနှစ်မျိုးလုံးကိုကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်အတွင်းအသုံးပြုရန်အထူးကန့်သတ်ထားသည်။ သူတို့သည်မမွေးသေးသောကလေးငယ်ကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် Crestor သို့မဟုတ် Lipitor ကိုသောက်နေပြီးသင်ကိုယ်ဝန်ရှိနေကြောင်းတွေ့ရှိပါက statin ကိုမသောက်ဘဲဆရာဝန်နှင့်ချက်ချင်းဆက်သွယ်ပါ။
ကျွန်ုပ်သည်အရက်နှင့်အတူ Crestor သို့မဟုတ် Lipitor ကိုသုံးလို့ရပါသလား။
ယေဘုယျအားဖြင့်၎င်းသည်စားသုံးရန်အန္တရာယ်ကင်းသည် အရက်ပမာဏအလယ်အလတ်မှသေးငယ်တဲ့ သင် Crestor သို့မဟုတ် Lipitor ယူလျှင်။ သို့သော်၊ အကယ်၍ သင့်တွင်အသည်းပြproblemsနာရှိလျှင်သို့မဟုတ်အလွန်အကျွံအရက်သောက်သုံးပါက statin နှင့်အရက်မရောမှီသင်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူနှင့်ဆက်သွယ်ပါ။ နာတာရှည်အသည်းရောဂါရှိသူများသည် statin သောက်သောအခါအရက်လုံးဝမသောက်သင့်ပါ။
Crestor သည် Lipitor ထက် ပို၍ လုံခြုံမှုရှိပါသလား။
Crestor နှင့် Lipitor နှစ် ဦး စလုံးသည်းခံနိုင်ကြသည်။ မည်သည့်ဆေးဝါးမဆိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှိသည်။ လေ့လာမှုများ (အပိုင်းတွင်ကြည့်ပါ) ဆေးနှစ်မျိုးလုံးသည်စမ်းသပ်မှုများတွင်ကောင်းမွန်စွာခံနိုင်ရည်ရှိကြောင်းပြသခဲ့သည်။
Crestor (သို့မဟုတ် Lipitor) ကိုသောက်သောအခါအဆီနှင့်လက်စထရောဓာတ်ပါဝင်မှုနည်းသောကျန်းမာသောအစားအစာကိုစားသုံးသင့်သည်။
သင်ရှောင်ရှားလိုသောအစားအစာအချို့မှာအဆီ၊ အပြည့်အဝနို့နှင့်သကြားလုံးများဖြစ်သည်။ အစားအစားသစ်သီးဝလံ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ အစေ့လုံး၊ ပဲ၊ အခွံမာ၊ ကြက်၊ ငါးကဲ့သို့အစာအာဟာရကိုအာရုံစိုက်ပါ။
Lipitor သည်ကြီးမားသောစပျစ်သီးဖျော်ရည်များနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်သော်လည်း Crestor သည်ဂရိတ်သီးသီးဖျော်ရည်နှင့်အတူလုံခြုံစိတ်ချနိုင်သည်။
Crestor သည်ကိုယ်အလေးချိန်နှင့်တိုက်ရိုက်မပတ်သက်ပါ။ သင်သည် Crestor ကိုသောက်ပြီးအလေးချိန်ပြောင်းလဲခြင်းကိုသတိပြုမိပါကသင်၏ကျန်းမာရေးပြုစုစောင့်ရှောက်သူကိုဆက်သွယ်ပါ။
Codeine နှင့် Hydrocodone: အဓိကကွာခြားချက်များနှင့်တူညီသည်
ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးရည်တွင် dxm အများဆုံးပါသောအရာ
typeaorbflu ကပိုဆိုးတယ်
တစ်ည melatonin ဘယ်လောက်စားနိုင်သလဲ